Nala soo xiriir - Shirkadda ASAKA Soo-saare & Soo-saare
Mashiinka ZHI XING (HANGZHOU) CO., LTD.
Zhi Xing Makiinado had iyo jeer waxay u hoggaansamaan macaamiisha marka hore, u hoggaansamaan heshiiska, ilaaliyaan mabda 'iimaan wanaagsan, oo haysa dabeecad togan si ay ugu qanciso macaamiisha' dalabka.
Mashiinka Zhi Xing
Mashiinnada Zhixing, oo ku yaal magaalada quruxda badan ee Hangzhou, waa soo saare xirfadle ah oo alaabada kor u qaadaya. Waxyaabaha ay soo saarto shirkadda waxaa ka mid ah suumanka wiishashka, wiishashka gacanta, korantada korantada, jaakadaha, silsilado lagu xiro iyo qalabka kale ee wax lagu qaado. Badeecaduhu waxay dhaafeen CE, GS iyo shahaadooyin kale, waxayna u hoggaansamayaan heerarka caalamiga ah sida heerarka Australia iyo Mareykanka. Waxyaabaha aan soo saarnay, dharbaaxada, wiishashka gacanta iyo jaakadaha ayaa aad ugu tartamaya suuqa. Waxay yihiin wax soo saarka ugu weyn ee shirkadeena, kuwaas oo helay jawaab celin suuq wanaagsan. Shirkadeena waxay in ka badan 15 sano oo khibrad ah u leedahay wax soosaarka wacyiga iyo sidoo kale adeegyada isdhexgalka wax soo saarka ee kor u qaadista iyo awooda xalka Shirkadeenu waxay khibrad u leedahay dhoofinta in ka badan 30 dal, sidaa darteed waxaan aad u naqaannay heerarka dhoofinta iyo dookha suuqa ee wax soo saarka ka soo qaada Japan, Mareykanka, Ingiriiska, Jarmalka, Australia, Singapore, Indonesia iyo dalal kale. Macaamiisheennu waxay ku hawlan yihiin dhismaha maraakiibta, dhismaha maraakiibta dekedda, macdanta iyo metallurgy, soo saarista qalabka, samatabbixinta tareenka, gaadiidka, sameynta birta, ilaalinta biyaha, korantada, tamarta dabaysha, dhismaha, iwm.
Tan oo ah
Shirkadeena waxaa ka go'an inay siiso macaamiisha wax soo saar sare oo tartan iyo xasilooni leh, iyadoo macaamiisha siineysa adeegyo tayo leh oo ugu hufan uguna welwel la'aan. Shirkadeena ayaa si adag u xakameysa tayada wax soo saarka, waxayna si adag u fulisaa baaritaanka wax soo saarka pre-soo-saarka ee dufcad kasta oo badeecooyin ah, kormeerka aan kala sooca lahayn ee habka wax soo saarka, kormeerka alaabada la soo gabagabeeyay ka hor rarka, iyo soo gudbinta warbixinnada kormeerka ka dib shixnadda hubi tayada wax soo saarka illaa inta ugu badan.
Magaca shirkadeena "Zhixing" waxaa loola jeedaa in shirkaddu ku dhegan tahay falsafada midnimada aqoonta iyo ficilka, macaamiil walba ula dhaqantaa si daacad ah oo daacad ah. Khiyaamo la’aan, qarsoon iyo macaash la’aan. Waxaan ku dadaalnaa inaan noqono xasiloonidaada, guuleysiga iyo kalsoonida lamaanahaaga horumarka waara!